ဘုရားရှင်၊ အာနန္ဒာ နှင့် ရေပြဿနာ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘုရားရှင်၊ အာနန္ဒာ နှင့် ရေပြဿနာ (၂)
ဘုရားရှင်၊ အာနန္ဒာ နှင့် ရေပြဿနာ (၂)
Posted by ashinindaka on Aug 16, 2011 in Copy/Paste |6comments
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ နောက်ဆုံးဝါ နောက်ဆုံးနှစ်အကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တစ်သုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။
ဒါနဲ့စပ်လို့ အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ်မှာ ဘုရားဖြစ်ပြီး
ဘုရားအဖြစ်နဲ့ (၄၅) ၀ါ တိုင်တိုင် နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့နေရာအစဉ်
ဘုရားရှင်ဝါတော်စဉ်ရေးသားထားတာကို ကူး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၄၅ နှစ်အတွင်း ၁၇ နေရာ ဘုရားရှင် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော နန္ဒိယ ၀ိဟာရ၌ ပဌမ၀ါဆိုသည်၊
(၂) ရာဇဂြိုလ် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ဒု,တ,စ, ပေါင်း၃-၀ါ၊
(၃) ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်ကျောင်း၌ ပဉ္စမ၀ါ၊
(၄) ရာဇဂြိုလ် မကုဠတောင် ချယားတော၌ ဆဋ္ဌမ၀ါ၊
(၅) တာဝတိံသာ ပင်လယ်ကသစ်ပင်ရင်း၌ သတ္တမ၀ါ၊
(၆) ဘဂ္ဂတိုင်း သံသုမာရတောအုပ်၌ အဋ္ဌမ၀ါ၊
(၇) ကောသမ္ဗီပြည် ဃောသိတာရုံကျောင်း၌ န၀မ၀ါ၊ (၉-၀ါမြောက်)
(၈) ၎င်းပြည် ပလလည်းတော အင်ကြင်းပင်အောက်၌ ဒသမ၀ါ၊ (၁၀-၀ါမြောက်)
(၉) ဗြဟ္မဏဂါမ နာလိကာရုံကျောင်းတော်၌ ဧကာဒသမာဝါ၊ (၁၁-၀ါမြောက်)
(၁၀) ဝေရဉ္စရာပုဏ္ဏားရွာ တမာပင်ရင်း၌ ဒွါဒသမ၀ါ၊ (၁၂ – ၀ါမြောက်)
(၁၁) ဇာလိယတောင်၌ ၁၃-၀ါမှာတကြိမ်, ၁၈-နှင့် ၁၉-၀ါမှာ တကြိမ် ပေါင်း ၃၀ါ၊
(၁၂) သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ ၁၄-၀ါမှာ တကြိမ်, ၂၁-၀ါမှ ၄၄-၀ါထိတကြိမ်ဆို၊ ပေါင်း ၂၅-၀ါ၊
(၁၃) ကပ္ပိလ၀တ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ ပန္နရသမ၀ါ၊ (၁၅ – ၀ါမြောက်)
(၁၄) အာဠ၀ီပြည် မဟာဝုန်တော၌ သောဠသမ၀ါ၊ (၁၆ – ၀ါမြောက်)
(၁၅) ရာဇဂြိုလ်ပြည်နယ် နလန္ဒရွာ သာရီပုဏ္ဏေးမကြီးကျောင်း၌ သတ္တရသမ၀ါ၊ (၁၇ – ၀ါမြောက်)
(၁၆) ၎င်းင်းနယ် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ၀ီသတိမ၀ါ၊ (၀ါ-၂၀ မြောက်)
(၁၇) ၄၅-၀ါမြောက်နောက်ဆုံး ဝေဠုဝရွာ၌ ၀ါဆိုတော်မူသည်။
အထက်တစ်နေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ဒီသုတ်တော်ထဲမှာ
ဓမ္မရေးသာမက လောကရေးတွေကိုပါ ဘုရားရှင် ဟောကြားထားတာတွေ့ရတယ်။
ရှင်ဘုရင်တို့အတွက် ကြီးပွါးရေးလမ်းညွှန်ချက် (၇) မျိုးကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို
ရဟန်းတော်တို့အတွက် ကြီးပွါးရေးလမ်းညွှန်ချက် (၇)မျိုးတို့ကိုလဲ မှတ်သားဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။
သီလစောင့်ထိန်းသူနှင့် သီလချိုးဖောက်သူတို့၏ အကျိုးအပြစ်တို့ကို
လောကီရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပါဋလိပုတ်ပြည် တည်ခြင်းအကြောင်းတို့ကို
လောကုတ္တရာရေးရာ သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုလဲ တပြိုင်နက်ထဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြုံပြီးပြောရရင် ရှည်လျှားတဲ့သုတ်တော်များကို စုစည်းထားတဲ့
ဒီဃနိကာယ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒီသုတ်တော်ကို
အရေးအသားကောင်းတဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးက ရေးသားထားပြီး
အဟောအပြောကောင်းတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဟောပြောထားတာဆိုတော့
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၊ ကုလားကျောင်းလေးမှာ
နားထောင်ခဲ့ရတာ (ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းတွေ မကောင်းခဲ့ပေမဲ့)
ဒါပေမဲ့ တရားတော် တစ်နေရာအရောက်မှာတော့
သဘောမကျစရာ သဘောမတူနိုင်စရာ အချက်ခလေးတစ်ခုကြားလိုက်ရလို့
ဒေါက်တာနန္ဒက (ယခု ကိုးရီးယားမှာ သီတင်းသုံး) ကို ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင် ၄၅ ၀ါမြောက်ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးဝါဆိုတဲ့နေရာက ဝေဠုဝရွာ၊
ဝေဠုဝရွာမှ ဝေသာလီပြည်၊ စာပါလစေတီကို ခရီးဆက်ပါတယ်။
စာပါလစေတီမှ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော၊
ပါဝါပြည်သို့ ဆက်လက် ကြွချီပါတယ်။
ကဆုန်လဆန်း ၁၄ရက် ညနေစောင်းအချိန် ပါဝါပြည်ကို ရောက်တယ်။
ပါဝါပြည် စုန္ဒဆိုတဲ့ ရွှေပန်းတိမ်သည်ပိုင်တဲ့
စုန္ဒက ဘုရားရှင်နဲ့ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းဆက်ကပ်လိုကြောင်း လျှောက်တယ်။
ဘုရားရှင်လက်ခံတော့ စုန္ဒ ဆွမ်းခဲဘွယ် ဘောဇဉ်ပြင်ဆင်တော့တယ်။
စုန္ဒစီမံသော အစားအစာများထဲတွင် သူကရမဒ္ဒ၀ လို့ခေါ်တဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးပါလာတယ်။
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဒီစုန္ဒရဲ့ သူကရမဒ္ဒ၀ ဟင်းကို ဘာဟင်းလဲဆိုတာ
သူကရမဒ္ဒ၀ဟင်းကို အဋ္ဌကထာများမှ (၅)မျိုးကွဲပြားနေတယ်။
(၁) မကြီးမငယ် ၀က်သားစားဖွယ်
(၄) နွားနို့အရသာ ငါးမျိုးဖြင့် စီမံထားသော စားဖွယ်
(၅) ဆေးတို့ဖြင့် စီမံထားသောစားဖွယ် တဲ့။
ဒီစုန္ဒကပ်တဲ့ ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းတို့ကို ဘုန်းပေးပြီး
ပြင်းထန်သော သွေးဝမ်းလွန်သော ရောဂါဖြစ်တယ်။
ခရီးဆက်ဖို့ အရှင်အာနန္ဒအား ပြောပါတယ်။
ပါဝါပြည်မှ (၆) မိုင်ခန့် ဝေးကွာသော ကုသိနာရုံပြည်သို့ ခရီးဆက်ပြန်တယ်။
အချိန်က ကဆုန်လပြည့်နေ့၊ နွေခေါင်ခေါင်။
တကယ်တော့ ဘုရားရှင် ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားက
ကုသိနာရုံသို့ ကြွတော်မူရခြင်းမှာ အကြောင်းရှိတယ်။
ပါဝါပြည်ကနေ ကုသိနာရုံကို ကြွချီတော်မူပါတယ်။
အကြောင်းက ကုသိနာရုံမှာရှိတဲ့ သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်ကြီးကို တွေ့ချင်လို့တဲ့။
သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်ကြီးကို တရားထူးသိမြင်မည့် အကျိုးစီးပွါးကို မြင်တော်မူလို့
ဆက်ကြွရင်း လမ်းခုလတ်တစ်နေရာမှာ ဘုရားရှင် ပင်ပန်းလွန်းလို့
သစ်ပင်ရိပ်ချဉ်းကပ်ပြီး အလုပ်အကျွေးဖြစ်တဲ့ ရှင်အာနန္ဒာကို
ငါဘုရား၏ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကို လေးထပ်ခေါက်ပြီး ခင်းပါလော့၊
ငါဘုရား ပင်ပန်းလို့ ထိုင်တော်မူအံ့” လို့ပြောပါတယ်။
လမ်းခရီးမှာ မောပန်းလွန်းလို့ ပါလာတဲ့သင်္ကန်းကို ခပ်ထူထူလေးခေါက်ခိုင်းပြီး
ခင်းခိုင်းကာ အနားယူတော်မူလိုတဲ့ ဘုရားရှင်ကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ပြီး
ဘုရားရှင်က ခင်းပေးတဲ့ သင်္ကန်းခေါက်လေးပေါ်ထိုင်ပြီး
“အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားအတွက် သောက်တော်ရေလေးတခွက် ဆောင်ယူပေးစမ်းပါ” လို့ဆက်ပြောပါတယ်။
နွေရာသီကြီးခရီးသွားနေရတာဆိုတော့ ဘုရားရှင် ရေဆာမှာပေါ့။
ကံအားလျှော်စွာ အနီးအနား မြစ်ကလေးရှိလို့ တော်ပေသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ နွေရာသီဆိုတော့ ရေအတော်နည်းနေတယ်။
ခရီးသွားလှည်းသားငါးရာက မြစ်ထဲ ဖြတ်မောင်းထားတာဆိုတော့
“အရှင်ဘုရား အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မြစ်ထဲက ရေတွေက နောက်ကျုနေပါတယ်ဘုရား၊
ဟိုရှေ့နားမှာ ကကုဓာဆိုတဲ့ မြစ် ရှိပါသေးတယ်ဘုရား၊
အေးမြတဲ့ရေ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ရေ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊
ဆိပ်ကမ်းကလဲ သာယာပါတယ်။ အဲ့နေရာရောက်မှ
အရှင်ဘုရားကို ရေကြည်ရေချမ်းကပ်ပါရစေ လို့
ဘုရားရှင်ရေဆာလွန်းတော့ ရှင်အာနန္ဒာကို ဒုတိယအကြိမ် ရေခပ်ခိုင်းပြန်ပါတယ်။
ရှင်အာနန္ဒာကြီးကလဲ အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်လည်လျှောက်တင်ပါတယ်။
ရှင်အာနန္ဒာက သပိတ်ကို ယူကာ မြစ်ဆီသို့ အပြေးကလေးထွက်သွားတယ်။
မြစ်ထဲရှိရေတွေ အနယ်ထိုင်ပြီး ကြည်လင်သွားတယ်တဲ့။
နယူးဒေလီ၊ ကုလားကျောင်းမှာ အရုဏ်ဆွမ်းဘုန်းပေးကာ
နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို နားထောင်နေရင်း
အတူသွား အတူလာဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကကို
“မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့် မြစ်ထဲက နောက်ကျုနေတဲ့ရေတွေ
ကြည်လင်လာတယ် ဆိုတဲ့စကားကို လက်ခံပါသလား” လို့မေးမိပါတယ်။
စာထဲမှာလဲ ဒီလိုပဲ ပြောထားတာပဲ တဲ့။
ဘုရားရှင်မှာ တန်ခိုးရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပေမဲ့
ဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးတော် ဘုန်းတော်လို့ပြောမဲ့အစား
ဘုရားရှင် ရေအင်မတန်ဆာနေတာကို ရှင်အာနန္ဒာသိလို့
ပရိက္ခရာရှစ်ပါးထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ရေစစ်ကိုလဲ
သပိတ်နည်းတူ သွားလေရာ ယူဆောင်သွားတဲ့အလေ့ရှိလေတော့
ပါလာတဲ့ရေစစ်နဲ့ သေချာစစ်ပြီး ခပ်ယူလို့
ဒီလို စဉ်းစားတာဟာ အင်မတန်ယုတ္တိရှိပြီး
စေတနာ၊ မေတ္တာတွေကို ဖော်ပေးရာရောက်ကြောင်း၊
ဒီအဖြစ်အပျက်က ၂၀၀၄ – ခုနစ်လောက်ကပါ။
ကိုယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပေါ် ဘယ်ဆရာတော်ကြီးထံကမှ ထောက်ခံမှု မရခဲ့ပါဘူး။
ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာတို့မှာက ကိုယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ချက်မျိုး စိုးစိမျှ မပါဘူးကိုး။
Nalanda Institute ဆိုတဲ့ ပညာသင်ဌာနလေးရှိတယ်။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက အဲ့ဟောပြောပွဲကို တက်ဖြစ်တယ်။
Mindfulness In Plain English ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ဘုန်းကြီး။
ဘွဲ့က Ven. H. Gunaratana တဲ့။
သူဟောပြောတဲ့ထဲမှာ ခုနက ရှင်အာနန္ဒာက ဘုရားရှင်ကို ရေကပ်တဲ့အကြောင်းပါလာပြီး
ဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့်မဟုတ်ကြောင်း ထည့်ပြောပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးအယူအဆ ဒီနေရာမှာ တူပြီဟေ့ဆိုပြီး
ပထမတစ်ကြိမ် ဘုရားရှင် ရှင်အာနန္ဒာကို ရေခပ်ခိုင်းတုန်းက
ကုန်သည်လှည်းငါးရာဖြတ်ပြီးခါစဖြစ်လို့ ရေ အမှုံထနေကြောင်း၊
မြစ်ရေဟာလဲ စီးဆင်းနေတာဖြစ်လို့ ကြည်လင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း
ကိုယ်လဲ ဒီတော့မှ ဟုတ်လိုက်လေ လို့ စိတ်ထဲက ရေရွတ်ပြီး
စာထဲမှာ မပါပေမဲ့ လက်ခံသင့် လက်ခံရပါမယ်။
မာပိဋကသမ္ပဒါနေန – စာပေကျမ်းဂန်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာလောက်နဲ့
သာဓုပါအရှင်ဘုရား..။ သာဓု၊ သာဓု..သာဓုပါ..။
မိချောင်းမင်းရေခင်းပြ၊ နွားလားဥဿဘရှေ့ထွန်ကြူး၊ ဘီလူးမင်းရှေ့သွားဖြဲခြောက်၊ နဂါးမင်းရှေ့မျက်စောင်းထိုး၊ တပ်ချုပ်ကြီးရှေ့မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်ရေးစကားပြောတယ်လို့ မထင်စေလိုပဲ ရိုးရိုးသားသား ထင်မိမြင်ရာကို လျောက်တင်ပါရစေဖလ…။
ဗုဒ္ဓဝါဒ အရာရာမှာ အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ လက်ခံရင် အတိတ်ဘဝ နွားသားပေါက်ဘဝနဲ့ မိခင်နွားမကြီးရေသောက်တာကို နှောက်ယှက်မိတဲ့ ဝဋ်ကျွေးဆပ်ရတယ်၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆီးအတား ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိတဲ့ ညဏ်တော်၊ဘုန်းတော်၊ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ရေကြည်လင်သွားတယ်ဆိုတာ သင်္ကမကင်းဖြစ်ရန်မရှိပါ။
မယုံကြည်သူ လူသားဝါဒီများပြောသလို သူ့သဘောသူဆောင် ဝဋကျွေးမဟုတ်ဘဲ ကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်လို့ ဖြစ်တယ်ဆိုလဲ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါ။ သို့ပေမဲ့ ယုတ္တဗေဒဆန်ဆန် ပြန်ပြောကြေးဆို တကယ်နောက်ကျိနေတဲ့ရေကို ရေစစ်နဲ့စစ်လို့ ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ရေအဖြစ် ရောက်သွားမယ်မထင်ပါ။
ဒီပြဿနာ ကြီးထွားစေခြင်းရဲ့ အရင်းခံသည် ရေနောက်မနောက် ဝဋ်ကျွေးဟုတ်မဟုတ် ဆိုခြင်းထက် များစွားပိုကြောင်း တရားစာပေ ဗဟုသုတရှိသူများ သိပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီဆန်လွန်းပြီး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ လက်လှမ်းမှီရာ ညဏ်မှီရာကိုသာ အမှန်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းများကိုတော့ အလွန်အကြူး ဖော်ကျူးဖွဲ့ဆိုခြင်းများနှင့်အတူ ဗုဒ္ဓတရား၊ ထေရုပတ္တိကို ထင်ဟပ်စေတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါကြောင်း…။
ဘုန်းတော်ကြီးမြတ် နတ်လူဗြမ္မာတို့၏ အားထားရာအစစ် ဖြစ်တော်မူအပ်သော
သံဃာတော်ရှင်မြတ် ashinindaka ဘုရား… ရဲ့ အဆိုအမိန့်ကိုများဝေဖန်နေပါသလားခင်ဗျား?
ကျွန်တော်မှာလည်း အဲ့လို မေးချင်၊ သိချင်၊ မရှင်းမလင်းတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အခုလို့ သိရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့က ကြောက်လို့စောင်ခြုံနေတဲ့ ကလေးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်လည်း အခုလို ဒွိဟတွေ၊ သံသယတွေကို ရှင်းစေမယ့် စာတွေများများတင်ပေးပါ ဘုရား။
လေးအသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဖြည့်စီးခဲ့တဲ့ ပါရမီတန်ခိုးတွေကမှ ဒီရေကို ကြည်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် …..
ဒါဆိုရင် ကဿဖ မြတ်စွာဘုရား မဟာဒုတ်ရဲ့ တဲပုတ်ထဲကို ကြွဝင်နိုင်ဖို့အတွက် တံဇာတ်မိတ်က မြင့်ပေးရ
ပြီး မြေကြီးက နိမ့်ပေးရတယ်ဆိုတာ ယုတ်တိမရှိတော့ဘူးပေါ့။
အတုမရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကို သာမာန်ရိုးရိုးသူတွေနဲ့ မနှိုင်းကောင်းပါဘုရား။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ….ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ အတုမရှိ ၊ အတူ မရှိတဲ့ ပါရမီရှင်ကြီးပါ။ မိမိ ဥာဏ်အဆင့်လောက်နဲ့တော့ သတ္တိကောင်းကောင်း မဝေဖန်ရဲသင့်ပါဘူး။